Pet / PP umgca Imveliso ezweni (model Heavy) - China Qingdao Xindacheng Plastic Machinery
Pet strip ukupakisha, okwabizwa ngokuba ibhanti zeplastiki PET, lilizwe esetyenziswa ngokubanzi uhlobo package izinto endaweni elitsha ibhanti ngentsimbi. Nophuhliso iminyaka kuwo nokuncipha kwixabiso, ngoku ngokubanzi esetyenziswa kwishishini sentsimbi, ishishini ifayibha lwekhemikhali, ishishini aluminiyam, ishishini iphepha, iiseramikhi Brick, kushishino Screw, ishishini icuba, ishishini yombane, noshishino lwempahla eyolukiweyo kunye noshishino iinkuni. Oku kakhulu ngokubanzi steel ibhanti kufakwe amandla aphezulu.
material Extruder Width（mm） inani umtya Output（kg/h）
Pet okanye PP iirholithi ingaveliselwa ngeteknoloji efanayo. Kuthatha imizuzwana embalwa ukutshintsha umgca ukucwangcisa-up ukusuka kwelinye ukuya kwelinye. izixhobo umsebenzi Heavy enokusetyenziselwa ezine, amathandathu anesibhozo imveliso ezizibeni.
Previous: Dripper ekunciphiseni
Composite Umtya Production Line
Pet Ukupakisha ezweni Band Production Line
Pet ezweni Band Machine
Pet ezweni Band Production Line
Pet / Kk Umtya Band Machinery
Kk Pet ezweni Band Production Line
Kk Umtya Band extrusion Machine
Kk Umtya Band Ukwenza Machine
Kk Umtya Ukwenza Machine
Kk Umtya Prodcution Line
Kk straps Band Production Machines
Kk straps Prodcution Line
Kk / Pet ezweni Band extrusion Machine
Umtya Band Production Machines
Ezizibeni Band Production Line
Isetyenziswa Pet ezweni Ban d Production Line